Ogaden News Agency (ONA) – War-murtiyeed ay JWXO Kasoo Saartay Soo Daynta Ergadii Wadahadalka ay Itobiya ka Afduubeen Nairobi
War-murtiyeed ay JWXO Kasoo Saartay Soo Daynta Ergadii Wadahadalka ay Itobiya ka Afduubeen Nairobi
Jabahdda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (ONLF) ayaa bayaan ay soo saartay ku tilmaantay inay tahay talaabo waxtar u leh wadahadalka, soo daynta labadii masuul ee ka tirsanaa ergada JWXO ee wadahadalka mudane Sulub Axmad iyo Cali Xuseen, kuwaasoo Xukuumadda Itobiya ay ka afduubeen Nairobi lanasoo daayay 1dii Bishan June 2015.
Waxay JWXO ku cadaysay bayaanka saxaafadeed in; Saraakiil ka tirsan sirdoonka Itobiya ay labada masuul keeneen magaalada Moyale oo dhacda xadka labada dal oo hadda ay ku sugan yihiin labadaa masuul magaalada Nairobi halkaasoo ay kula kulmeen xaasaskoodii. Markii laga afduubay Nairobi 26kii January 2014, ayaa waxaa gacanta loo galiyay Itobiya oo ku haysay meel aan la garanayn muddo sanad iyo afar bilood ah.
Soo daynta labada mudane ayay cadeysay JWXO inay ka dambeysay diblomaasiyadda dawladda Kenya oo ku adkaystay in lasoo daayo madaxda laga afduubay dalkeeda, iyo xubna ka tirsan bulshada caalamka oo ku taageeray ONLF soo daynta ergada ay Itobiya afduubtay. Dawladda Kenya ayaa ku hawlan fududaynta wadahadalka u dhexeeya ONLF iyo xukuumadda Itobiya.
Waxay JWXO ku cadaysay bayaanka inay soo dhaweynayso soo daynta iyo imaatinka goobtii laga afduubay masuulinta ururka, taasoo ah talaabo waxtar leh oo ka saartay meesha caqabad weyn oo ku gudbanayd wadahadalka JWXO iyo Itobiya.
ONLF waxay ku cadaysay bayaanka inay diyaar u tahay marwalba wadahadal dhab ah oo suurtagaliya nabad ku dhisan cadaalad iyo xal siyaasi ah oo waara in loo helo qadiyadda Ogadenya.